IDC ga -emelite ọnụ ọgụgụ mbupu Xiaomi maka nkeji mbụ nke 2019 | Androidsis
IDC weputara akụkọ na Eprel 30 na -akọwapụta ọnụ ọgụgụ ndị na -eme ekwentị ebubata na nkeji mbụ nke 2019.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ kpughere na Xiaomi butere mkpokọta nde 25, 10% erughị otu nkeji iri na ise nke 2018. Agbanyeghị, Xiaomi wepụtara nkwupụta akụkọ na -egosi na data a ezighi ezi na erughị ihe o zitere. Nkọwa ndị ọzọ n'okpuru ...
Nnukwu teknụzụ ndị China kwuru na nkwupụta akụkọ ahụ ebubatala ekwentị nde 27.5 na nkeji mbụ nke 2019. N'ihi nke ahụ, IDC wepụtara nkwupụta ya wee kwupụta na ọ ga -emegharị akụkọ ahụ na ọnụọgụ ọhụrụ n'izu na -abịa.
Ị nwere ike ịnọ na -eche ihe ọgba aghara a bụ, na azịza ya bụ ọnụ ọgụgụ ndị a dị mkpa nye ndị na -etinye egodị ka ha kwesịrị ịma ka ụlọ ọrụ ha na -akwado si arụ ọrụ nke ọma. Ọnụ ọgụgụ pere mpe nwere ike imetụta ntụkwasị obi ndị ọchụnta ego na azụmaahịa, ihe ga -emetụta oke mmepe, uto na mgbasawanye nke ụlọ ọrụ n'onwe ya.
Akụkọ IDC dị iche na nke ụfọdụ ụlọ ọrụ yiri ya, dị ka Canalys, Counterpoint, and StrategyAnalytics. Ha atọ kọrọ na Xiaomi butere nde 27.8, nde 27.8, na nde 27.5 n'otu n'otu, nke dị elu karịa nkeji iri abụọ na ise nke IDC.
Xiaomi bụ ugbu a otu n'ime ndị nrụpụta ise kacha elu n'ahịa ama. O nwere oke ahịa 8% ma ọ ka na -agbasawanye iru ya. N'ọnwa gara aga, ọ wepụtara nke ahụ Redmi gaa, nke Redmi 7 na Ihe ngosi RedN 7 na Naịjirịa, na-aka akara mbanye ya ọzọ na Afrịka.
Eleghị anya anyị na -ahụ ọbụna ọrụ ka ukwuu n'akụkụ ndị nrụpụta China, ebe ụlọ ọrụ ahụ ji nke nta nke nta gosipụta nke a ruo nwa oge. Mgbasawanye ya na ewu ewu ya adịghị ka ọ kwụsịrị, ihe dị iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IDC ga-ewelite ọnụ ọgụgụ mbupu Xiaomi maka Q2019 XNUMX izu na-abịa